Wasiir Beyle” Canshuurta waa inaan bixinaa si aan u helno Amni,Caafimaad iyo Waxbarasho”, | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir Beyle” Canshuurta waa inaan bixinaa si aan u helno Amni,Caafimaad iyo...
Wasiir Beyle” Canshuurta waa inaan bixinaa si aan u helno Amni,Caafimaad iyo Waxbarasho”,
Muqdisho(SONNA) Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney bixiyaan canshuurta si ay u fududaato helida adeegyada muhiimka ah ee Dowladda uga baahan yihiin.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in canshuurta oo la bixiyaa ay sahleyso in horay loo dhaqaaqo,islamarkaana dalka uu ku talaabsado horumaro la taaban karo,sida dib u dhiska,kabcida kaabayaasha dhaqaalaha iyo iney shacabka si joogta uga helaan Dowladda adeegyada asaasiga ay u baahan yihiin.
“Canshuurta waa in aan bixinaa si aan u helno Amniga, Caafimaad & Waxbrashada. Canshuur la’aan ma socon karto,Soomaliyeey gacmaha aan is qabsano”,ayuu ku yiri Wasiir Beyle Qoraalka uu bartiisa Twitterka soo dhigay.
Dowladda uu hogaaminayo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo ayaa balan qaaday iney xoogga saareyso in sare loo qaado daqliga soo gala dalka iyo in shacabka la tuso kalsooni ay ku bixin karaan canshuurta looga baahan yahay.
Ugu danbeyntii,Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa wada dadaalo ku aadan sidii lagu hormarin lahaa dhaqaalaha dalka,waxaana si loo hubiyo canshuuraha dalka soo galaya uu dhowr mar kormeeray Dekadda Muqdisho iyo Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Previous articleWasiir Isloow oo Ankara kula kulmay Wasiirka Arimaha Gudaha Turkiga
Next articleBurundi oo ka baxaysa Maxkamadda dembiyada dagaalka ee ICC